तीन सय ६० भैँसीलाई सुत्केरी भत्ता ! Bizshala -
काभ्रेपलाञ्चोक । पनौती नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रका ३६० भैँसीलाई ‘सुत्केरी भत्ता’ वितरण गरेको छ । नपाले चालू आर्थिक वर्षदेखि सुत्केरीभत्ता स्वरुप प्रति भैँसी रु पाँच हजार दिएको हो । कार्यालयले भैँसीबाट जन्मिएका पाडा वा पाडीको जन्मदर्तासमेत गरिरहेको छ ।
कमाइ हुन्छ, बचत हुँदैन ? यी उपाय अपनाउनुहोस्
नयाँदिल्ली । हिजोआज आमजिन्दगीमा पैसाको निकै महत्व छ । त्यसैले...